Eyona miqamelo ili-11 igqwesileyo yabaLali besisu ngo-2021 - Ibhlog
Eyona miqamelo ili-11 igqwesileyo yabaLali besisu ngo-2021
I-11 yeMiqamelo Egqwesileyo yabaLali besisu
Indlela yokukhetha imiqamelo eLungileyo kwabaLali besisu?
Sonke sineendawo ezithile zokulala ezizezona ziphumla kakhulu kuthi. Ngelixa abanye bethanda ukulala emacaleni, abanye bakhetha ukulala ngomqolo okanye isisu. Ukuba ukhetha ukulala ngesisu sakho, nalu uluhlu lwethu lweyona miqamelo ilungileyo yabalali besisu ukukunceda ukhethe. Uninzi lwabantu abalala ngesisu bathanda imiqamelo ebhityileyo kuba imiqamelo ephakanyisiweyo inokubangela ukungakhululeki kunye neentlungu. Le miqamelo yenziwe ngomgangatho olungileyo, izinto ezilungele ulusu ukuze zikhululeke kakhulu kunye nokuphefumla. Ke, hlola uluhlu lwethu ukuze wazi ngakumbi.
Nye. I-Beckham I-Luxury Linens yeHotele yoQokelelo lweMiqamelo yeBhedi
Uyilo olongezelelweyo lomqamelo weBeckham lunceda kuxinzelelo, iintlungu zentamo, kunye nezinye iintlungu kunye neentlungu. Ziyi-OEKO-TEX-eqinisekisiweyo kwaye zenziwe ukusuka kwi-100% enye indlela esezantsi. Itekhnoloji yokupholisa yomqamelo kunye nomqhaphu ophefumlayo unokulawula ubushushu kubusuku obupholileyo. Zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye zigcina imilo yazo ngaphandle kokudibanisa okanye ukudibanisa ngokusetyenziswa ixesha elide.
Isigqubuthelo sesateen esinesilika
wazi njani ukuba inja yakho ikhulelwe
Mbini. Royal Therapy King Memory Foam Pillow
Umqamelo we-foam wememori ekhutshiweyo ulala ngobunono entloko kunye nentamo ukukhulula uxinzelelo, iintlungu kunye neentlungu. Uyilo lwayo lwe-contour lunokuzalisa isithuba phakathi kwentamo yakho kunye nomatrasi, ukugcina umqolo wakho ulungelelaniswe njengoko ulala. Isigqubuthelo soqalo somqamelo sinetekhnoloji yokuphelisa ubushushu, ikhusela ukwakheka kwe-thermal njengoko ulele.
Iyakwazi ukugcina imilo yayo
Inceda ukunciphisa ukujula nokujika
Isenokuba nkulu kakhulu
3. Ibhedi yeBluewave Ultra Slim Gel Memory Foam Pillow
I-Bluewave foam pillows zi-intshi ezimbini ukuya kwezine zibhityile kunemiqamelo eqhelekileyo. Banokubonelela ngenkxaso eqinileyo ubusuku bonke ukuxhasa intamo yakho, umva, kunye namagxa ukuze ulungelelanise kakuhle. Lo mqamelo wenziwe ngeeponti ezintathu ezishinyeneyo, ezinomoya, i-foam yememori yeeseli ezivulekileyo kunye nokufakwa kwejeli.
Isigqubuthelo semesh esikhuselayo
Akukho khemikhali ziyingozi
Isine. Blissbury Memory Foam Umqamelo
Imiqamelo inokuphelisa intlungu kunye nokuqina ngokunciphisa uxinzelelo entanyeni nasemva. I-foam yenkumbulo enokubunjwa ithwala intloko kwaye inika inkxaso, inceda ngokuphefumla kunye nokurhona. Lo mqamelo obhityileyo wejeli onemingxuma yomoya unokukugcina upholile kwaye ukhululekile ngokulawula ubushushu bomzimba wakho. Isigqubuthelo esisuswayo senziwe nge-bamboo kunye ne-polyester, enceda ukucima ukufuma.
Iza nebhegi yokugcina
Ifumaneka ngemibala emibini
5. ITempur-PedicTempur-Cloud Breeze Dual Cooling Pillow
I-Tempur-Pedic yokunciphisa uxinzelelo lwe-cushion yenziwe ngezinto ezilungelelanisa intamo, intloko, kunye namagxa ngokulala okungenabuhlungu. Ubusuku bonke, iileya zejeli ezikhethekileyo kumacala omabini omqamelo zikugcina upholile kwaye ukhululekile. Izinto eziphathekayo zeTempur zibonelela ngenkxaso ephuculweyo kunye nokulungelelaniswa. Kucetyiswa ukuba umqolo, icala, kunye nesisu sleepers.
indlela yokusebenzisa incwadana inokuvula
6. Lifewit Bed pillows
Ukuqinisekisa ukuthamba, i-Lifewit pillows isebenzisa i-ultra-thin 1.5D micro silicon polyester fiber. Ibangela ukwanda kokuguquguquka, ukuphefumla, ukuthuthuzela, kunye nenkxaso xa ulele. Ukuvavanywa ngeemilo zeentloko ezininzi, ubukhulu, kunye nobunzima, imithwalo izaliswe ukuvelisa inqanaba elilinganisiweyo lokuphumla kwentloko ngaphandle kokubingelela ukuthamba kunye nokuthuthuzela.
Ngamana ukucaba ngokukhawuleza
7. Zamat Contour Memory Foam Pillow
Umqamelo weZamat ergonomic ubandakanya ifom yebhabhathane ekhethekileyo, i-neck contour, i-central cavity, kunye nokuphakama komqamelo ohlengahlengiswayo. Ineendawo zokumisa iingalo ezahlukileyo ngenxa yendlela yebhabhathane. Ubume obunqamlekileyo bugcina intamo ekuphakameni okufanelekileyo xa ulala kwaye unika inkxaso efanelekileyo. Inxalenye yayo esezantsi ekhutshwayo ikuvumela ukuba utshintshe ubude bomqamelo njengoko kufuneka. Isigqubuthelo sangaphandle senziwe ngoqalo oluphefumlayo kunye nepolyester ukukugcina upholile.
Izigqubuthelo ezifakwe ziphu
Isenokuba mcaba kakhulu
8. Dlight Memory Memory Foam Half Side Pillow
Umqamelo we-memory foam u-ultra-thin, 2.7-2.9 i-intshi ubukhulu, kwaye uyilwe njengomqamelo osisiqingatha kunye nomphezulu ongqukuva kunye nomzantsi osicaba. Inceda ukuthomalalisa ubunzima bentamo kunye nezihlunu kwaye ikhuthaza ukuphefumla lula kwabalele isisu kunye nomqolo. I-polyester / i-bamboo blenched cover ithambile kwaye iyaphefumla. Lo mqamelo wenziwe nge-medium-firm, i-foam ephantsi kunye ne-ergonomic edge ukulungelelanisa umqolo ngokufanelekileyo.
Ikhava esuswa ngokupheleleyo
9. I-Coolux Memory Foam Pillow
Umqamelo womlomo wesibeleko we-Coolux unoyilo lwe-ergonomic olunceda ukuphucula umgangatho wokulala. Ukuxinezeleka kumbindi womqamelo kusongela intloko kakuhle, ngelixa i-bulges emacaleni iyancipha ukungahambi kakuhle kunye neentlungu zentamo. I-pillowcase yayo yangaphandle yenziwe nge-100% ye-polyester, enika ukuphefumla kunye nokuthamba, ukuthintela ukubila kunye nezinye iimfihlo ekudibaneni nombindi womqamelo.
ndilisusa njani iphunga le-skunk
Akukho khemikhali ivumba
uziphu ehlala ixesha elide
Isenokungabi nayo inkxaso yaneleyo
10. Umqamelo wokuSebenza weBedgear
Imithwalo ifumaneka kwiindawo ezine eziphakamileyo ukusuka kwi-0.0 ukuya kwi-3.0. Ilaphu letekhnoloji ye-dri-tec linceda ukugcina ukubila kude nolusu. Ubushushu bomzimba obugqithisileyo bukhutshwa ngeteknoloji ye-Air-X ukugcina ubushushu bomzimba buzinzile. Umqamelo wangaphakathi unokucocwa indawo, kwaye ikhava yayo yangaphandle ineziphu ezifihlakeleyo.
Isigqubuthelo esihlanjwa ngumatshini
Inokuphucula umgangatho wokulala
Isenokuba ngqindilili kakhulu
Shumi elinanye. I-Comficloud yokupholisa iMemori yoMqamelo wegwebu
Ngamagquma anamacala amabini, ilaphu lesilika elibandayo neligudileyo kwelinye icala linokubonelela ngamava apholileyo okulala ehlotyeni kunye nentuthuzelo yokubila ebusuku kunye nokulala okushushu. Icala elichaseneyo lenziwe ngoqalo oluphefumlayo kunye nepolyester. Ineteknoloji yemingxuma yomoya, ekwazi ukujikeleza umoya, okukhokelela ekuqokeleleni okuncinci kobushushu.
Inceda ukukhulula iintlungu zentamo
Unokulandela ezi ngcebiso xa ukhetha imithwalo efanelekileyo yokulala kwesisu.
Inkxaso ethambileyo: Imithwalo yenkxaso ethambileyo iya kubonelela ngomqamelo ococekileyo phakathi kwakho nomatrasi wakho, ukuqinisekisa ukuba intloko yakho ayixhonywanga kakhulu.
Ukuzaliswa okucinezelweyo: Khetha imiqamelo epakishwe ngeentsiba okanye into elingana nenkxaso efanelekileyo.
Iloft ephantsi : Qwalasela umqamelo one-loft ephantsi ukugcina indawo engathathi hlangothi.
Yeyiphi imiqamelo eyahlukeneyo yabantu abalala ngesisu?
Imiqamelo engenye ephantsi, i-memory foam pillows, kunye ne-latex pillows isebenza ngokufanelekileyo kwabalele ngesisu.
Intsingiselo yokomoya yokubona umnyama
Loluphi olona hlobo lomqamelo olubi kwabalala ngesisu?
Imithwalo enzima ayifanelekanga kubantu abalala besisu.
Yintoni eyona nto ingcono kumqamelo wesisu?
Ezona zixhobo zidumileyo zi-down-alternative, i-memory foam, kunye ne-latex. I-Buckwheat, phantsi, intsiba, kunye ne-polyfoam zezinye iindlela ezifanelekileyo.
Ukuba ulala esiswini, ubunzima bomqamelo wakho kunye nokuphakama kunokuba nefuthe kwintloko yakho, intamo, kunye nokulungelelaniswa kwakho komgogodla. Siyathemba ukuba uluhlu lwethu lwezona pillows ezingcono zokulala zesisu lunokukunceda ufumane umqamelo ofanelekileyo wokulala kakuhle ebusuku.
Eyona iPeel kunye neStick Backsplash Tiles
Iingxowa zokuGcina ukutya eziSetyenzwa kwakhona kwakhona
Izibane zoVavanyo zoVavanyo eziMnandi zangaphandle
Eyona iNgcono phantsi kweeCream zamehlo eIndiya
Ukwabelana Ngesondo Nokuthandana Kwabafazi Ngokuhlwa Wear Ukukhathalela Amakati Ukukhula Ukuhluma Fiction Ukubhala
ungazi njani ukuba iikati ziyadlala okanye ziyalwa
Ndazi njani ukuba ndizakulunga kwisihlalo senqwelomoya
izinto zokuthetha xa umntu esweleka
ukucoca njani iiterminal zebhetri yemoto eneviniga